(tonga teto avy amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina)
Ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina dia firenena any Azia atsinanana. Ny isan' ny mponina ao aminy dia mihoatra ny 1,3 lavitrisa, 1/5 ny isan' ny mponina eto an-tany, izy noho izany no firenena be olona indrindra eto an-tany. Hatry ny 1979, mba tsy "hipoaka" ilay firenena noho ny habetsaky ny olona, ferana ho tokana ny isan' ny zaza anatin' ny tokantrano iray ho an' ny Sinoa Han. Nanomboka tamin' ny taona 2013, dia nomena alalana hiteraka zaza roa ireo mpivady izay nateraka ho zaza tokana. Amin' ny velarantaniny misy 9 641 144 km², firenena ngeza indrindra any Azia atsinanana ny Sina, ary izy ny firenena fahatelo lehibe indrindra ara-kangeza ao aorian' i Rosia, sy i Kanada.
Voaantso tamin' ny 1 Oktobra 1949 ny Repoblika Entim-bahoakan' i Sina, nanaraka ny fandresen' ny antoko kômonista sinoa tamin' ny Guomindang. Kanefa, i Sina dia sivilizasiôna antitra indrindra mbola misy eto an-tany amin' izao tontolo izao, efa nisy 5 000 taona lasa izy. Ankehitriny, miseho ho repoblika sôsialista izy, antoko iray no mitondra, manana hasina amin' ny faritany 22 ary faritany mizaka tena dimy, kaominina efatra ary faritany administrativa manokana (Hong-Kong sy Macao).
2.1 Faritanin' ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina
Tamin' ny 1949, nanapitran' ny fahakahan' ny hasina ambon' i Sina an-kôntinenta ny Kômonista (miaraka amin' ny nosy Hainan). Tapitra teo ny andron' ny ady an-trano sy ny fizaràna ara-pôlitika. Tamin' ny 1 Oktobra, Nilaza ny fiforonan' ny Repoblika ny Mponina ao Sina i Mao Zedong teo amin' ny toerana Tien'anmen, any Beijing. Lasa tany Taiwan ny olon' i Guonmindang, Ilay hasina vaovao te hametraka toerana ny filaminana ekônomika sy sôsialy vaovao, mifantoka amin' ny ohatra sôvietika sy atao ho an' ny zava-misy sinoa.
Faritanin' ny Repoblika Entim-Bahoakan' i SinaHanova
Manana olana momba ny sisintany ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina. Ny tena goavana be dia ilay olana ara-tsisintany mikasika ny nosin' i Taioana. Tononin' ny Taioaney hoe Repoblikan' i Sina ny tenany ; miteny hoe sinoa ny Taioaney fa manao fahaleovantena ara-pôlitika (tsy manaiky ny communisme ny Sinoa mipetraka any Taioàna). Na dia tsy nisy fiovàna aza tamin' ny lalàm-panorenana, tsy mitaky ny fiandrianam-pirenena intsony ary miteny ihany ny fitondran'ny Taioàna hoe firenena ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina. Tsy miaiky ny fikambanana iraisam-pirenena hoe firenena manana fahaleovantena ny Taioàna (ohatra ny Firenena Mikambana). Miteny ny RES hoe faritany fotsiny ihany ny nosin' i Taoàna. Nanao fehezan-kevitra ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina mba hitsofoka amin' ny Repoblika Entim-Bahoakan' i Sina ny Repoblikan' i Sina , fa tsy neken' ny fitondranan' i Repoblikan' i Sina io fehezan-kevitra io hatramin' izao.
Tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetr'androHanova
Ny politika ny Zanaka tokanaHanova
Tsifitoviana aran'isan'ny vavy sy ny isa'ny lehilahyHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblika_Entim-Bahoakan%27_i_Sina&oldid=1040769"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 14:52
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:52 ity pejy ity.